Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPod taabto si MacBook Pro / MacBook Air / iMac
> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPod taabto si Mac
Sidee baan nuqul karaa sawir aan iPod taabto si aan iMac? Folder ayaa on my iMac aan u hagaagsan photos gal aan iPod xiriiri helay tirtiray, laakiin sawirrada ayaa weli aan iPod taabto.
Dhawaan, mid ka mid ah saaxiibaday dhibaato la mid ah sida kor ku xusan, laga wada badiyay sawiro iyada oo u baahan in ay sawiro ka iPod xiriiri wareejiyo Mac. Si kastaba ha ahaatee, Lugood marnaba ka caawisaa, laakiin tirtirayaa ku dhowaad dhammaan sawirada iyada iPod taabto markii la isku dayay in uu u hagaagsan iyada iPod xiriiri Lugood. Later, waxaan soo jeediyay in iyada isku day TunesGo Wondershare (Mac) . Waxaa dhab ahaan u shaqeeyo. Haddii aad ku jirtid xaalad la mid ah oo ma garanayaan sidii ay u sawiro ka iPod xiriiri wareejiyo Mac, ka dibna raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo sameeyo.
Tallaabada 1. Download software iPod xiriiri Photo kala iibsiga
Click Download si aad u hesho Wondershare TunesGo (Mac) xirmo rakibo. Waxay kuu ogolaanaysaa isticmaala si fudud u gudbiyaan wax walba, oo ay ku jiraan music, videos, iyo sawiro ka iPod taabto si Mac. Ka dib markii download ah, waxaa loo soo dajiyo aad Mac.
Isku day TunesGo Wondershare ah (Mac) si ay u gudbiyaan iPod photos taabto si Mac!
Fiiro gaar ah: Haddii aad kombiyuutar Windows ku salaysan leeyihiin, dhihi Windows7 ama Windows 8, inaad isku daydaa inaad ka TunesGo Wondershare (Windows) inay sawiro ka iPod xiriiri wareejiyo computer Windows ku salaysan .
Tallaabada 2. Isku aad iPod taabto si Mac ah
Connect aad iPod xiriir Mac via cable USB ah oo aan bilowno TunesGo Wondershare ah (Mac). Tani waxay la xiriiri sawir iPod qalab kala iibsiga aad ogaadaa doonaa iPod taabto si toos ah iyo soo bandhigaan macluumaadka ee suuqa kala bilaabo. TunesGo (Mac) taageertaa iPod xiriiri 4/5 socda ee macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo sidoo kale macruufka 5 buuxda.
Tallaabada 3. Transfer photos iPod taabto si Mac
Riix Photos on column ka tagay ee suuqa ugu weyn. Markaas, in Window Photos, aad arki doonaa photos yihiin kuwa badbaadayaa in 2 meelo: Camera Roll oo Photo Library. Guji mid ka mid Roll Camera ama Library Photo ah inuu wada muujiyo dhammaanba sawirada meel kasta siday u kala horreeyaan. Dooranaysaa, kuwaas oo sawiro aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan si Mac oo guji "Dhoofinta". In daaqadaha dabamariyay kor, dhigay meel ay ku kaydiyaan kuwaas oo sawiro aad rabto in lagu wareejiyo ka iPod taabto.
Talooyin: Guud ahaan, sawiro ku iPod taabashada ku kaydsan yihiin in 2 meelo: Roll Camera iyo Library Photo ah. Photos aad la iPod taabto ama synced in iPod xiriiri via iCloud, taas oo aan ku soo wacno Photo Stream, badbaadiyey ee ku giringiriya Camera. Photos aad synced in iPod xiriiri Lugood badbaadiyey ee Photo Library.
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo sawiro iyadoo ay fayl "Event", ama waxaynu odhan album sawir, waa in aad xaq u guji magac album sawir, in menu jiido-hoos, dooro "Dhoofinta". Markaas ka heli meel Mac in uu kaydiyo album sawirka.
Tani waa tutorial ah oo ku saabsan sawiro ka iPod xiriiri gudbaayo MacBook Air, MacBook Pro ama iMac. Waa mid aad u fudud in ay gaarto goolka haddii aad isku daydo Wondershare TunesGo (Mac). Waa ay Lugood Saaxiibkiis ugu fiican, samaynta ilaa meesha Lugood gaaban dhaco. Ku raaxeyso noloshaada mobile.
Daawo Video ah si ay u gudbiyaan Photos ka iPod taabto si Mac
Isku day software this si ay u gudbiyaan sawiro iPod taabto si aad Mac hadda!